India: Yoga abụghị okpukpe ma ọ bụ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, kama ọ bụ sayensị: osote onye isi | Akụkọ ụwa India - GELN T EGO
India: Yoga abụghị okpukpe ma ọ bụ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, kama ọ bụ sayensị: osote onye isi | Akụkọ India
Coimbatore: Onye isi ala Fridaybọchị Fraide, Venkaiah Naidu kwuru yoga abụghị okpukpe ma ọ bụ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana sayensị a ga-emekwa ya maka ọdịmma nke mmadụ. "Needswa chọrọkwu obi ụtọ na ọ bụ ihe ahụ Onyenwe anyị Shiva na-ezi anyị. Adiyogi bụ onye bu ụzọ nyefee ihe a kpọrọ mmadụ sayensị sayensị, "ka o kwuru, mgbe ọ na-ekwu okwu n'ememe Mahashivarathi nke e mere na Isha Yoga Center ebe a, ebe akpụrụ akpụ nke nwere ụkwụ dị 112. Adiyogi kpụrụ ndabere /
Adiyogi bụ ihe mkpali na nnọchite nke yoga, nke na-abụghị nkwenye, kama ọ bụ teknụzụ maka mgbanwe, Onye isi ala kwuru.
“Yoga abụghị okpukpe, ọ bụ sayensị. Oge eruola ka anyị niile laghachi yoga.
Obi dị m ụtọ na Prime Minista Narendra Bhai Modi butere ụzọ iwetara yoga na United Nations. Ugbu a yoga na-ejide! Site na ntinye Prime Minister, "o kwuru.
Ọ kwara n’agha, na-ekwu na yoga abụghị ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Anyi aghaghi imeghari yoga maka oganihu anyi.
Yoga bụ etiti ntọala sayensị. Onye ahụ etinyela yoga iji nweta mmepe mmepe na-adigide. " Anyị bụkwa ndị ọdịbendị buru ibu, nke na-ekwere na ụwa niile bụ otu ezinụlọ. Naanị otu omenala, nanị mmepeanya nke na-asụ n'asụsụ a bụ mmepeanya ndị India.
Ọ dighi mba ọzọ nke n speakskwu okwu dika nka. anyị chọrọ ọdịmma mmadụ niile. Anyị achọghị ịkpa ókè megide ndị mmadụ. Anyị chọrọ ka mmadụ niile biri n’udo na nkwekọ. “Naidu kwuru na ihe achọrọ taa bụ mbibi nke ihe ọjọọ dị iche iche.
Anyị ga-echekwa nnukwu ọdịbendị nke nnukwu mmepeanya a. Ọ dị anyị mkpa inyefe ya n'ọgbọ ndị ọzọ. " NVM APR APR APR
Akwụkwọ akụkọ 19am nke February 21, 2020 - VIDI
Togo - onye isi ala: Faure Gnassingbé, onye bụbu onye mmeri?